ဗြိတိန် က ခရစ် ဖရုမ်း ပြင်သစ် ‪Tour de France‬ စက်ဘီး ပြိုင်ပွဲ မှာ ဗိုလ်စွဲ | The FNG
ဗြိတိန် က ခရစ် ဖရုမ်း ပြင်သစ် ‪Tour de France‬ စက်ဘီး ပြိုင်ပွဲ မှာ ဗိုလ်စွဲ
July 22, 2013 · by 21 South News	· in လူငယ်ရေးရာ, အားကစားသတင်း, ပြည်ပသတင်း.	·
အကြိမ် ၁၀၀ မြောက် ခရီးရှည် ပြင်သစ် စက်ဘီး ပြိုင်ပွဲ Tour De France မှာ
ဗြိတိန် နိုင်ငံ သား ခရစ် ဖရုမ်း အနိုင် ရ ဗိုလ်စွဲ သွား ပါတယ်။ အသက် ၂၈ နှစ်
အရွယ် ရှိ တဲ့ ခရစ် ဟာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် မှာ ဘယ်(လ)ဂျီယံ က ဘရက်ဒလေ
၀စ်ဂင် ဗိုလ်စွဲ တုန်း က ဒုတိယ ရရှိ ခဲ့ သူ ဖြစ်ပါတယ်။
ငယ်စဉ် က ကျန်းမာရေး နုံချာ ခဲ့ တဲ့ ခရစ် ဖရုမ်း ဟာ အသက် ၇ နှစ် အရွယ်
မှာ ပြိုင်စက်ဘီး စီးနင်းမှု ကို စတင် ခဲ့ ပြီး အာဖရိက နိုင်ငံ တွေ ရဲ့ပွဲ စဉ်
မှာ အနိုင်ရ ဗိုလ် စွဲ ကာ Tour De France ပြိုင် ပွဲ တွေ ကို ၀င် ပြိုင် တာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ကို ကင်ညာ နိုင်ငံ မှာ မွေးဖွား ခဲ့ တာ ဖြစ် ပါတယ်။ Tour De France မှာ တော့
Sky အသင်း အနေ နဲ့ပြိုင်ပွဲ ၀င် ခဲ့ တာ ဖြစ် ပါတယ်။
နိုင်ငံ တကာ က ပြိုင်ပွဲ ၀င် သူ စက်ဘီး သမား ၁၇၀ လုံး ပါရီ မှာ ပန်းဝင်
တယ်လို့ ပြင်သစ် ရုပ်သံ က ထုတ် လွှင့် သွား ပါတယ်။
အမေရိကန် နိုင်ငံ သား လန်(စ) အမ်း စထရောင်း က ၁၉၉၅ ခုနှစ်က နေ ၂၀၀၅ ခုနှစ်
ထိ အနိုင်ရ ဗိုလ်စွဲ ခဲ့ ပါတယ်။
စက်ဘီး ခရီးစဉ် ကို နှစ်စဉ် ပြင်သစ် နိုင်ငံ နဲ့မြေထဲ ပင်လယ် ထဲ က ပြင်သစ် ပိုင်
ကျွန်းတွေ ကို ပါ ဖြတ် သန်း စီးနင်းတာ ပြု လုပ် ပြီး ဒီနှစ် မှာ တော့ ကော်စီကာ ကျွန်း ကို
ဖြတ် သန်း စီနင်း ကြပါတယ်။
Tour de France အထိမ်းအမှတ် အောင်မြင်ခြင်း မုခ်ဦး မှာမီးရောင်တွေ နဲ့အလှဆင်
ခရီးစဉ် တစ်လျှောက် တောင်ကုန်း ၊ တောင်တန်းများ ရဲ့အမြင့် ပေ
Tour De France ခရီးစဉ် လမ်းကြောင်း
Fly-by: Alphajet planes from the Patrouille de France (France’s Patrol) fly over the Arc de Triomphe
All in green: Green jersey leader Peter Sagan has even dyed his beard green for the final stage…
As ever, the final stage is little more thanaceremonial procession, but with Chris Froome – barring spectacular disaster – all but certain of becoming the second successive Briton to win the race, the ride around Versailles and Paris should hold plenty of interest.
On his way: Froome tookajet rather than cycled to the final stage…
← ဘေဂျင်း လေဆိပ် မှာ ဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်
မြစ်တော် နီတာရဲ လေး အတွက် ဘုရင်မကြီး အဲလိဇဘက် နာမည်ပေးမယ် →
One response to “ဗြိတိန် က ခရစ် ဖရုမ်း ပြင်သစ် ‪Tour de France‬ စက်ဘီး ပြိုင်ပွဲ မှာ ဗိုလ်စွဲ”
Pingback: MyanmarLatestNews » ဗြိတိန် က ခရစ် ဖရုမ်း ပြင်သစ် ‪Tour de France‬ စက်ဘီး ပြိုင်ပွဲ မှာ ဗိုလ်စွဲ·